Voici, ovao ny feo ho SMS amin'ny WhatsApp miaraka amin'ity fampiharana mahafinaritra ity | Androidsis
Voicer, ilay fampiharana izay mamadika ny audio WhatsApp ho lasa lahatsoratra
toerana misy anao | | Fampiharana Android, WhatsApp
Betsaka no tsy mampiasa azy ireo, fa ny hafa kosa tsy afaka miaina tsy misy azy ireo satria manamora kokoa ny fifandraisana izany, eny, Miresaka momba ny naoty feon'ny WhatsApp aho. Ity fanatsarana ity izay nampiana efa ela, dia nanamora ny fomba ahafahantsika mifandray amin'ny fampiharana WhatsApp, fomba iray haingana kokoa nefa tsy mandany fotoana manoratra. Na izany aza, ny olona sasany dia misoroka ny fampiasana an'io fiasa io.
Misy toe-javatra izay tsy ahafahantsika mandre fanamarihana am-peo na satria any am-piasana isika, any an-dakilasy sns ... ary mieritreritra foana foana isika raha ho zavatra maika izany. Noho io antony io dia mitondra vahaolana aminao aho amin'ity fihemorana ity, satria azoko antoka fa ho tianao izany.
Ovay ho memo miaraka amin'i Voicer ny memo feo
Ity fampiharana ity dia noforonin'i mpampiasa forum Reddit, dia niaritra fihemorana ihany koa izy noho ny tsy fahazoany nandre ireo memo feo voaray tamin'izany fotoana izany. Amin'izany fomba izany dia azo vakiana ny naoty feo haingana sy malina fa tsy mila hilalao ny memo feo.
Ny fiasan'ny Voicer dia tena tsotra. Raha vantany vao tafapetraka ao amin'ny terminal anay, hangataka antsika hametraka ilay fiteny izy io Amin'ny fipihana eo ankavanana ambony, tsy maintsy misafidy ny fiteny tadiavina isika satria misy fiteny 50 mahery.
Raha vao voafantina ilay fiteny, hampiseho amintsika andiana dingana izay amaritany ny fiasany, ary tsotra toy ny fisafidianana memo feo ary mizara izany amin'ny fampiharana izay vao napetrantsika, izay hamerina aminay amin'ny endritsoratra ny feo naoty.
Toa izany ity fampiharana ity dia manaiky tsara ny memo feo Fa toy ny mahazatra, raha hanoratra tsara ny lahatsoratra isika, dia ilaina ny mazava tsara sy ny fanononana tsara.
Manantena izahay fa hanohy hanavao ity app ity ny developer mba hanatsarana ny fanekena. Tsy isalasalana fa olona maro no hampiasa an'ity rindranasa mahafinaritra ity satria, araka ny hitanao dia fitaovana tsotra iray izy io izay mendrika apetraka amin'ny terminal anay satria tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no afaka mampiasa azy io. Azo alaina ao amin'ny Play Store maimaimpoana ity app ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Voicer, ilay fampiharana izay mamadika ny audio WhatsApp ho lasa lahatsoratra
Henrry estrada dia hoy izy:
Azonao apetraka ve ny rohy fampiharana? Tsy haiko hoe inona marina izany
Valiny tamin'i Henrry Estrada
Afangaro ny Doogee Unboxing !!
Ny finday 10 tsara indrindra eny an-tsena